The-echebe Mmadụ na Road Initiative egosi na Silent Islands na Indonesia - The Kasị Beautiful kreenu nke XCMG na ụwa - China Xuzhou Fenghe Intelligent
The-echebe Mmadụ na Road Initiative egosi na Silent Islands na Indonesia - The Kasị Beautiful kreenu nke XCMG na ụwa
Mgbe atọ afọ mmepe, na-echebe na Road agbanweela si China si ụzọ mba otutu mmadu kwenyere, na-enweta a nọmba nke dị mkpa rụzuru. Ka ọ dịgodị, daashi nke-echebe Mmadụ na Road Initiative nwekwara eweta oké ọnụ ahịa ohere nke mmepe maka China ewu ígwè ụlọ ọrụ.
Kabaena Island nke Indonesia ewepụtakarị ndị mmadụ na aki oyibo nkwụ, nwayọọ oké osimiri ifufe na-agba egwú na ígwé ojii n'okpuru-acha anụnụ anụnụ na mbara igwe. Na ukwuu akụ nke minerals, a anwansi ala-amalite na-egosi na ika-ọhụrụ vitality na-akpọte ogologo-ehi ụra Kabaena n'okpuru China si echebe Mmadụ na Road Initiative.
Nso nso a, anọ QY25K5-m ụgbọala cranes nke XCMG Emewo ekwenye hoisting nke okporo ahụ na Kabaena Island nke Indonesia.
Ngo bụ n'okpuru abụọ na-oge na-ewu. The akpa oge nke abụọ n'ichepụta edoghi abiawo ekwubie na-adọ, na nke abụọ oge, nke bụ na-ewu ugbu a, na-agụnye asatọ n'ichepụta e. Okporo ahu n'okpuru hoisting, featuring 15t na arọ na 20m n'ịdị elu, na-achọ na nkwonkwo n'olu site na anọ ígwè ọrụ. Ọ bụ doro anya na a ule nke kreenu ịrụ ọrụ, na-ewu ụlọ ọrụ họọrọ XCMG QY25K5-m imezu nke a ọrụ.
Dị ka a ụgbọala kreenu nlereanya na ndị kasị ibu nwe ụwa, XCMG QY25K5-m ụgbọala kreenu mezuru ọtụtụ mba wuo ụlọ na ihe fọrọ nke nta ka afọ 20. The otu ebe na ukwuu-irè-ebuli, slewing, luffing na magburu onwe inwego arụmọrụ riteworo n'ụgwọ otito si ahịa na rụọ.
Okwu: 8 # Shengbao Road, High-tech Development Mpaghara, Xu Zhou City, Jiangsu Province, PRChina
Mayor agwa ukwuu nke XCMG Brazil cont ...
A Omume na Udo Brazil Town Basking na Soft Sunshine on a Winter n'ehihie On August 11 na Brazil (obodo oge), Mr. Zhou Tiegen, Mayor of Xuzhou, na ya bịa, mere ihe na-na saịtị nnyocha XCMG ...